Nolazain’ireo mpikatroka ao Moskoa fa notapahin’ny orinasam-pifandraisandavitra, araka ny baikon’ny polisy, nandritra ny hetsi-panoherana ny tambajotram-pinday · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2018 5:30 GMT
Mpikatroka maro no nitaraina momba ny fanelingelenan'ny tambajotra manerana ny faritra nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ny 5 May tany Rosia // Ervins Strauhmanis, Flickr CC BY 2.0, sary namboarin'ny Runet Echo
Nipoaka nanerana ny firenena ny hetsi-panoherana roa andro mialoha ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy hitondran'i Vladimir Putin ho filoham-pirenen'i Rosia faninefany.
Nihiaka ny teny filamatra hoe “tsy tsar (mpitondra Rosiana) ho antsika izy” ny vahoaka mpanao fihetsiketsehana tany amin'ny tanàndehibe maromaro tamin'ny 5 May.
Ireo tanàndehibe Rosiana dimy voalohany amin'ny araka ny isan'ireo voahazona nandritra ny hetsi-panoherana tamin'ny 5 May (ireo izay tena tsy ampoizinao ho ao anaty lisitra akory ireo telo farany):
Maro ireo mpanao fihetsiketsehana no naparitaky ny polisy misahana ny rotaka an-kerisetra, ary olona an-jatony no nosamborina, tanora avokoa ny ankamaroan'izy ireo.
Tsy sangisangy mihitsy izany, nisambotra tamin-kerisetra ireo ankizy ny polisy, izay fandikana mazava ny lalàna.
Rehefa niha-mafy ny hetsi-panoherana, mpikatroka maro no nitatitra fa nanjary tsy nahazo na tsy nandeha mihitsy ny tambajotran'ny findain'izy ireo. Nilaza ny sasany fa ninia nanakorontana ny kalitaon'ny tolotra na nanaisotra mihitsy ny laharan'izy ireo araka ny baikon'ny manampahefana ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra Rosiana.
Nilaza ny Mediazona, fampitam-baovao antserasera tsy miankina iray mitatitra ireo fitsarana ara-politika sy ny rafi-pamonjana ao Rosia, fa nahatsapa ny vokatr'izany ireo mpitati-baovaon'izy ireo:
Notapahan'ny Tele2 [iray amin'ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra Rosiana] omaly ny tambajotra finday sy ny aterineto am-pinday manodidina ny kianja Pushkinskaya (nahatsapa izany ny mpitati-baovao anay.) Nilaza ny mpandraharaha fa noho “asa fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ” izay natao ny 5 May no nahatonga izany.
Nasehon'ny Mediazona tao anatin'ny siokan'izy ireo ny pikantsarin'ny fifampiresahana teo amin'ny mpanjifa Tele2 iray sy ny sampan-draharaha misahana ny tolotry ny mpanjifa ao aminy:
Tele2: Azafady miangavy anao mba handray ny fialantsininay noho ny fanelingelenana, niasa tamin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izay mety niteraka fahatapatapahana ny orinasanay. Tsy misy ny fanelingelenana ny tolotra amin'izao fotoana izao. Misy zavatra hafa azoko hanampiana anao ve?
Mpanjifa: Manatsara ny kalitaon'ny tolotra ianareo ao amin'ity toerana manokana ity sy tamin'izay fotoana manokana izay? Raha azoko tsara?
Tele2: Eny, tena tamin'io fotoana io mihitsy no nanatontosana izany. Voakasiky ny asa fanatsarana ilay faritra voalazanao. Misy zavatra hafa azoko anampiana anao ve?
Nahatsikaritra ihany koa ireo mpikatroka fa namafa ireo laharana finday tao anaty lisitra ny Beeline, mpandraharahan'ny fifandraisandavitra faharoa lehibe indrindra ao Rosia. Nilaza i Denis Styazhkin fa namafa ny laharan'ny findainy ny orinasa araka ny baikon'ny polisy:
Namaha ny nomeraoko ihany ny farany ny Beeline ary toy izao ny valintenin'izy ireo: nosakanana ny laharanao noho ny fangatahana fampiharana ny lalàna !!!!
Pikantsary: ​​Ny laharan'ny finday [nofafana], Denis Styazhkin. Nahoana izany no voasakana ?????
Valiny: Miarahaba! Naato ny nomeraonao noho ny fangatahan'ny manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna. Efa nesorina ny fanakanana.
Tao anatin'ny fanambarana an-gazety, nandà ny fanakanana ny nomeraon'ny finday noho ny baikon'ny polisy ny solontenan'ny Beeline, ary nilaza fa tsy nanakana ny laharan'i Styazhkin izy ireo. Nilaza ny orinasa fa noho ny olan'ny tambajotra tsy naharaka no nahatonga ny fahatapahana ary nilaza ihany koa izy ireo fa mety voasakana noho ny fanitsakitsahana ny fepetran'ny tolotrasa ny laharan'i Styazhkin, saingy tsy nilaza ny antsipiriany mikasika ilay fanitsakitsahana kosa ry zareo.
Nandà ny fanakanana ireo mpanjifany tao Moskoa nandritra ny fihetsiketsehana omaly ny orinasan'ny fifandraisandavitra Rosiana Beeline. Nilaza tamin'ilay mpikatroka @styazshkin ny orinasa fa nosakanana ny kaontiny araka ny baikon'ny polisy .
Nitatitra ihany koa ireo mpikatroka hafa fa nisy ny fahatapatapahan'ny tambajotran'ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra lehibe maro nandritra ny fihetsiketsehana.